Daawo Sheekh aan towxiidka toosin karin oo isku dayaayo inuu gaalo muslimiyo: Video - iftineducation.com
iftineducation.com – Sheekh Saciid Raage, wuxuu ka mid yahay dad Soomaaliyeed ee ku qaxay waqooyiga Amerika. Waxaa lagu yaqaanaa inuu ka wacdiyo qalabka warbaahinta bulshada (Social Media), iskuna dayaa inuu islaamka u gudbiyo dadka aan muslimka ahaynin ee uu ku dhax nool yahay, ama ku nool dunida dacalladeeda, asagoo adeegsanaayo afka ingiriiska.
Sida aan mar sii horreaysay aan ku daawaday waraysi uu siiyay Televisionka Somali channel, waxaa dalka Kanada ku soo dhowaysay kaniisad katoolik ah oo u muujisay naxariis uu ka waayay dadka Soomaaliyeed, kuna sigtay inuu masiixi noqdo.
Ma garan karo heerka ay gaarsiin tahay aqoonta Sheekh Saciid Raage u leeyahay diinta islaamka, mana doonaayo inaan ka hadlo. Waayo, qof ahaan u garan maayo, mana dhagaysto wacdigiisa.
Hase yeeshee, waxaan la yaabay videoga aan halkan idinkgu soo gudbinaayo oo baraha qaarkood soo qaateen, cid qaladka ka muuqda ku baraarugtayna aysan jirin.
Soo wax lala yaabo ma ahoo Sheekh dad muslinaayo oo u laqinaayo inuusan ilaah jirin? Si fiican u dhagayso, wuxuu 2da nin ku leeyahay: Äsh-haddu an laa ilaaha, kumana daraayo illallaah.
Ma dareenkaca illowsiiyay? Ma videogaa la farsameeyay? Mase waxaan meesha ka maqnaynin maaahmaahdii reer warsheekh ee 5 beri Sheekh laguma noqdo?.
Qalad halka uu ka yimid, waxaa ka jawaabi karo Sheek Saciid Raage qudhiisa. Annaga waxaa noo muqda qalad aan garan karin sida uu ku dhacay.